Chelsea oo si xun u jiiday Aston Villa…(Pato oo durba is-baray taageerayaasha Blues)+SAWIRRO – Gool FM
Chelsea oo si xun u jiiday Aston Villa…(Pato oo durba is-baray taageerayaasha Blues)+SAWIRRO
(London) 02 Abriil 2016. Chelsea oo marti ah ayaa 4-0 ku xaaqday Aston Villa kulan ka tirsanaa Premier League.
Qeybtii hore ee dheesha ayaa lagu kala nastay 2-0 da’yarka Blues Ruben Loftus-Cheek ayaa goolka koowaad ugu daah furay daqiiqadii 26-aad waxaana goolka labaad dhaliyay weeraryahankooda cusub ee Pato, kubbad rigoore ahayd oo isla isaga lagu galay waxaana lagu keenay badel oo waxaa lagu soo badelay Ramey oo dhaawac ku baxay.
Markii la isku soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta ayaa waxaa goolka saddexaad u dhaliyay Chelsea Pedro isla isaga ayaana goolka afaraad dhaliyay daqiiqadii 59-aad kubbad uu Pato si qurxoon goolhayaha u dhinac dhigay balse laga diiday oo markii la soo tufay ayuu ku celyay Pedro.
Guushan ayaa waxay Blues ku soo xirteen kaalinta sagaalaad ee kala horeynta PL inkastoo ay ka bixi doonaa haddii ay soo adkaato Liverpool.
Safafka Rasmiga Ah ee Bournemouth vs Man City, De Bruyne oo ku soo bilowday!
SAWIRRO: Ciyaartoyda Real Madrid oo soo gaaray magaalada Barcelona!